Sayniska | TeraNews.net |
Nikon CFexpress Nooca B 660 GB ee Z9
Soo jeedinta xiisaha leh ee Oclean 11.11.2021
Astrophysicists oo ka kala yimid qaarado badan ayaa mar qura ka hadlay mala-awaalka joogitaanka meeraha labaad ee dhulka oo kale. Sida laga soo xigtay…
Tonometer OMRON M2 Basic waa kaaliyaha caafimaad ee ugu fiican
Suuqa tonometer -ka ayaa hodan ku ah dalabyo. Iibsadahana wuxuu ku lumay noocyo kala duwan oo ay bixiyeen daraasiin soo -saareyaal kala duwan ...
Sida geesiyaasha hal taxane ay yiraahdeen - "Jiilaal ayaa soo socda." Waxaadna ku doodi kartaa baaxadda kuleylka adduunka oo aan dhammaad lahayn. In kasta oo…
Achedaway Smart Cupping Therapy - Ha iloobin wax ku -qabashada joogtada ah
Daaweynta bangiyada caafimaadka (daaweynta cupping) ayaa bini -aadamku yaqaannay in ka badan kun sano. Buugaagta ku saabsan daawada, qaybta ...
Koontada dulqaadashada rover ayaa caan ku ah TWITTER
NASA waxay dadka siisay fursad ay ku indha indheeyaan meeraha guduudan iyagoo adeegsanaya muraayadda dulqaadka dulqaadka. Ameerika ...
Soosaarayaasha saacadaha casriga ah iyo jijimooyinka ayaa cadeyn kara waxtarka qalabka garaaca wadnaha ee garaamkooda inta ay rabaan. Laakiin tan ...
Dayaxa super pink waa dhacdo dabiici ah
Super-moon (supermoon) waa dhacdo dabiici ah oo dhacda xilliga ugu dhow ee meeraha Dunida ee dayax gacmeedka ...
Qalabka saabuunta aan lala xiriirin - waa xal guri u ah gurigaaga
Goobaha dadweynaha, markaad booqanayso dukaanka, kaalin shidaal ama goob caafimaad, waxaad ka heli kartaa qalab badan oo faa'iido leh. Iyo ...
Neuralink - Elon Musk ayaa kaamil yeelay daanyeerka
Xusuusnow weedhan "Daanyeerku wuxuu ku dhow yahay inuu ka soo baxo boorsada"? Waxaa ku dhawaaqay Elon Musk ee 2019 oo ku saabsan hirgelinta ...
Filimka I am Legend - sanadkee ayuu falku dhacayaa
Mawduuc kulul oo ku saabsan shabakadaha bulshada bilowga 2021 waa tallaalka COVID iyo cawaaqibkiisa. Qorayaasha qoraallada ayaa sawirro ku dhajiya ...
Teleskoob xiddigis F30070M oo wata tripod
Telescope heer-gelitaan oo xiiso leh ayaa laga heli karaa khaanadaha dukaanka internetka. Muraayadaha waaweyn iyo sawirka cad ...
Xiaomi Mijia Sonic cadayga korontada T100
Caday cadayga korontada ku shaqeeya waa shey daryeel afka ah oo si fudud ula tartami doona burushyada caadiga ah. Dhamaan…
Difeisi smart lamp - mustaqbalku wuu yimid
Kaliya 10 US dollars iyo shaqooyinka noocan oo kale ah waxaa bixiya laambada smart Difeisi. Feejignaan - guluubka nalka korontada (1 ...
Codka astaamaha jabaqda inta lagu jiro dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa ama dhaqdhaqaaqa ayaa had iyo jeer sababa cabsi dadka. Isugeynta kala-goysyada ayaa si aan qasab ahayn u tilmaamaya ...
Immisa awood ayuu qaboojiyuhu leeyahay
Taageerayaasha wadayaasha qaybaha furan ee wadada waxay si joogto ah uga cabanayaan gawaaridooda. Sida, iyadoo qaboojiyaha daaran yahay, awoodda gaariga ...
UFS 4.0 - Samsung waxay jebisaa fikradaha la aaminsan yahay
Calanka Nokia N73 ayaa lagu dhawaaqay iyadoo leh kamarad 200 MP ah
Drone DJI Mini 3 Pro ayaa miisaankeedu yahay 249 garaam iyo muuqaalo qabow
Samsung Pro Endurance microSD ee duubista fiidiyowga
TV-box X10 MAX Plus 4/64 kuna yaal AMLOGIC S905X3
Apple Arcade wuxuu ku bixiyaa ciyaaro cusub dukaanka appka
AntMiner A3 Siacoin: bilawga macdanta SIA